umbuzo CalClassics ....
I-2 iminyaka ye-6 imihla edlulileyo #193 by PAYSON
I ukufunda wanamathela "funda-kum" ngenxa Connie Rikoooo kaThixo. Andazi ukuba uyakwazi ukubhabha njani, yaye kuyabonakala ukuba, yenze kakuhle. Ndaya CalClassics, kodwa zonke iinqwelo-moya 2004, 2000, kunye 98. Andiqondi ukubhabha nantoni na kodwa izinto fsx, ngaphandle ukulwa, ngoko mna phantse a guy Ubisoft. Enkosi info, nakuba. Ngokwenene kakhulu uncedo lwakho. (I Electra Uyaphila)